भरतपुरबाट आयो ‘डरलाग्दो’तथ्य ,कस्तो आँउला प्रतिवेदन ? – YesKathmandu.com
निकै नै चासो पूर्वक हेरिएको भरतपुरको मतगणना स्थल आइतवार रणभुमी बन्यो । सोही समय देखि त्यहाँको मतणना स्थगित गरिएको छ । अहिले माओवादी कांग्रेस पुन मतदान गर्नुेपर्नैअ डानमा छन भने एमालेले मतगणना अगाडि बढाउनुपर्ने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ ।
स्मरणीय छ,त्यहाँ मतपत्र च्यात्दा च्यात्दै प्रहरीले दुई माओवादी कार्यकर्तालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
सोही प्रकरण पछाडि मतगणास्थल सिल गरिएको छ । निर्वाचनमा खटिएका प्रतिनिधि एवं विश्लेषकहरुले पनि प्रधानमन्त्री पूत्री रेणु दाहाल हार्ने निश्चित भएपछि यो सब घटाएको भन्ने टिका टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यद्यपि निर्वाचन आयोग र छानबीन समितिको प्रतिवेदन आज दिउसो सम्म सार्वजनिक गरिने तय भएको छ । यता, निर्वाचन बुथभित्रै बसेर सुक्ष्म तरिकाले नियालेका प्रतिनिधिहरुले यस्तो डरलाग्द्यो तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
चुनाव सफल बनाउन सहयोग हुन्छ
तीन श्रीमती, २० गर्लफ्रेन्ड !
पाँचखालमा बस दुर्घटना, २ को मृत्यु
शहिद गोविन्द गौतमका परिवारलाई भेट्न केपी ओली कञ्चनपुर जाने
उद्योगमन्त्री थापालाई लक्षित गरी धनकुटामा बम विस्फोट